Sabatry ny Fanahy Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Category: Sabatry ny Fanahy
Mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra
TOROLALANA FITARIHANA AHAFANTARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA Zavatra tsy misaraka amin’ny fiainana kristiana ny fahafantarana sy fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra. Eo amin’ny fanapahan-kevitra raisintsika ve isika mahatsiaro manontany an’i Jesosy? Andriamanitra no mampahafantatra antsika izany sitrapony izany, ary ny anjarantsika dia mandray sy mitanila ka mifandray aminy. Ampahafantariny antsika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina sy ny Teniny izany sitrapony izany, …
[Famporisihana hanao soa amin’olona sy hanao ny marina] « Aza mamihina ny soa amin’izay tokony homena azy, Raha azon’ny tananao atao ihany; aza manao amin’ny namanao hoe: Mandehana, ka avia indray, fa rahampitso no homeko; Kanefa manana ihany ianao. » Ohabolana 3:27-28 « Ary afoinao ho an’ny noana izay hanina tianao, ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka …